“Zidane ma addeegsan doono James Rodríguez xitaa haddii ay dhaawacmaan dhamaan ciyaartoyda kale” – – Gool FM
“Zidane ma addeegsan doono James Rodríguez xitaa haddii ay dhaawacmaan dhamaan ciyaartoyda kale” –
(Madrid) 15 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa isku dayeeysa inay sii haysato adeega James Rodríguez, balse haddii ay awoodi weyso, waxay qorsheeneysaa inay u dirto meel ka baxsan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Halyeeyga reer Colombia Carlos Valderrama ayaa xaqiijiyay in ninka ay isku wadanka yihiin una ciyaara kooxda Real Madrid ee James Rodríguez uusan fursad ka heli doonin macalinka reer France ee Zinedine Zidane.
Carlos Valderrama ayaa sheegay in James Rodríguez uusan u ciyaari doonin Real Madrid xitaa hadii ay dhaawac ku maqan yihiin dhamaan ciyaartoyda kooxda, isagoo carabka ku adkeeyay in Zinedine Zidane uusan dooneynin inuu ku dhex arko gudaha garoonka Santiago Bernabeu.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeeyga reer Colombia ee Carlos Valderrama waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Real Madrid si fiican ayeey u garaneysaa James Rodríguez, si la mid ah Zidane oo horey ay u soo wada shaqeeyeen”,
“Laakiin dhibaatada ugu weyn ee ii muuqata ayaa ah in Zidane uusan u baahneyn James Rodríguez”.
“Zidane ma addeegsan doono James Rodríguez xitaa haddii ay dhaawacmaan dhamaan ciyaartoyda kale”.
Waxyaabihii laga diiwaan geliyey kulankii xalay ay kooxda Liverpool guusha ka gaartay Chelsea ee UEFA Super Cup
Miyuu sii joogi doonaa De Gea kooxda Man United? – Waxaa ka jawaabaya halyeeyga Peter Schmeichel